Mudita Shwe Kyaung: ယူထ - အလှတုို့ ဆုံစည်းရာ
ယူထ - အလှတုို့ ဆုံစည်းရာ
Arches National Park က အမေရိကန်အနောက်ပုိုင်း၊ ယူးထပြည်နယ် Moab ဆုိုတဲ့မြို့လေးရဲ့ အနားမှာ။ ဒီမြို့လေးဟာ နီတျာတျာ တောင်တန်းတွေကြားက အမေရိကန်တောသဘာဝ မြို့ငယ်လေးတစ်မြို့သာ။ Arches နဲ့ နီတျာတျာ ကျောက်စုိုင်ကျောက်သား သဘာဝအလှတရား တွေသာမရှိရင် သာမန်သူတွေအဖုို့ ဒီမြို့လေးဆီရောက်ဖုို့ဆုိုတာ ဖြစ်နုိုင်ချေနည်းပါမှာပါ။ ခုတော့ သဘာဝကလက်ဆောင်ပေးထားတဲ့ Arches နဲ့ အလှများကုိုပုိုင်ဆုိုင်ခွင့်ရလေသမုို့ ခရီးသွားတွေနဲ့ စည်ကားသာယာနေတဲ့မြို့လေးတစ်မြို့ ဖြစ်နေတယ်။ မြို့ရဲ့အလယ်တည့်တည့် ကုိုလည်းဖြတ်၊ မြို့လေးရဲ့ အဓိက လမ်းမကြီးလည်းဖြစ်တဲ့ အမှတ် ၁၉၁ ဟုိုက်ဝေးလမ်း ဝဲယာ တစ်လျောက် တည်းခုိုခန်းငယ်တွေက အစီအရီ။ ခရီးသွားလုပ်ငန်းက ရတဲ့ဝင်ငွေဟာ
တစ်ချိန် က ကမ္ဘာ့ယူရေနီယံမြို့တော်လုို့ တင်စားခဲ့ကြတဲ့ ဒီမြို့လေးရဲ့ အဓိကဝင်ငွေ ဖြစ်နေပြီထင်ပါရဲ့။
မြို့လေးရဲ့ ခရီးသွားကြော်ငြာတစ်ခုမှာတော့ “တောင်တက်ချင်သလား၊ ခရီးကြမ်းကြမ်း ကုန်း မော့မော့မှာ လမ်းလျှောက်လုိုသလား၊ လေဘီးယက်ကားကြမ်းကြမ်းနဲ့ လမ်းကြမ်း ကျောက် ကြမ်း ခရီးကြမ်းမှာ စွန့်စွန့်စားစား ခပ်ရမ်းရမ်း ခပ်မုိုက်မုိုက် ကားမောင်းလုိုသလား၊ ဒီအရာ တွေအား လုံးကုို Moab က ပေးစွမ်းနုိုင်ပါတယ်”တဲ့။ ဒါကြောင့် ဒီမြို့လေးက ဂျစ်ကားသမား တွေ၊ (4 wheels drivers) ဖုိုးဝီးလ်ကားမောင်းသမားများရဲ့ ဦးတည်ရာနေရာဖြစ်သလုို ကျောက်တောင်တွေပေါ် စွန့်စွန့်စားစား စက်ဘီးစီးလုိုသူတွေရဲ့ သွားလုိုပျော်မွေ့ရာတစ်နေရာ လည်း ဖြစ်နေပါတယ်။
ဒါတွင်မက ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယုိုတွေ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာ မကြာမကြာတွေ့ရတတ်တဲ့ သက်တန့်လုို ကျောက်နီနီကုန်းကြီးများ(Arches) ရဲ့အလှကုို ကုိုယ်တုိုင်ကြည့်ုချင်လုို့ ရောက်လာကြတဲ့ ကုိုယ် လုို သာမန်ခရီးသွားတွေလည်း အမြောက်အများရှိကြပေလိမ့်မယ်။ တကယ်တော့ Moab ဆုို တဲ့ ဒီတောမြို့ငယ်လေးရဲ့ ဝန်းကျင်တခုိုမှာက ဆန္ဒအမျိုးမျိုးနဲ့လူသားတွေအတွက် သူတုို့ဆန္ဒကုို ပြည့်ဝအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးနုိုင်တဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေက မြောက်များစွာသာပါလေ။
ကုိုယ်ကတော့ ကျောက်ကြားလမ်းကြမ်း ခရီးကြမ်းမှာ ဂျစ်ကားကြမ်းကြမ်းကုို တရကြမ်း မောင်း ရဲလောက်အောင်လည်း သတ္တိက မကောင်း။ မတော်လျင် တောင်စွန်းကျောက်စွန်း ဂမူစွန်းက နေ ပြုတ်ကျကာ ကျွမ်းထုိုးပက်လက် အသက်ထွက်နုိုင်တည့် စက်ဘီးမျိုးလည်း စီးဝံ့သူ၊ စီး တတ်သူ မဟုတ်။ ကျောပုိုးအိပ်တစ်လုံး ကျောမှာချိတ်၊ တောင်တက် တောင်ဝှေးတစ်ချောင်း လက်မှာဆွဲပြီး မလျော့သောဇွဲနဲ့ ခရီးခဲကုိုလျှောက်နုိုင်လောက်အောင် ဇွဲလုံ့လရှိသူလည်း မဟုတ်လုို့ Arches အမျိုးသားဥယျာဉ်ကြီးရဲ့ သဘာဝအလှတရားများကုို တဝခံစားကြည့်ရှုတဲ့ သာမန်ခရီးသွားတစ်ဦးသာဖြစ်ခဲ့တယ်။
တကယ်တော့ ဒီနေရာ ဒီဒေသကုိုရောက်ဖူးတာ၊ ဒါ ပထမအကြိမ်သာဖြစ်တယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဒေသမှာ တွေ့ရတဲ့ရှုခင်းများကတော့ သိပ်မစိမ်းလှပါဘူး။
ကျောက်နီတောင်တန်းကြီးတွေကြားမှာ ဖုံတထောင်းထောင်းနဲ့ ကားကြမ်းကြမ်းကြီးတွေကုို တရကြမ်းမောင်းနှင်သွားတတ်ကြတာ။ တုိုက်ပျက်လုိုလုို၊ ဘုရားစေတီဟောင်းကြီးတွေလုိုလုို၊ နီမောင်းမောင်း အဆောက်အဦတွေကြား မြင်းရုိုင်းထွားထွားကြီးတွေစီးလုို့ ဦးထုပ်ကားကား ဆောင်းထားတဲ့ မုတ်ဆိတ်ဖားလျားနဲ့ နွားကျောင်းသားရုပ်ရှင်မင်းသားကြီးတွေကုို တွေ့မြင်အား ကျပြီး ဒီနေရာမျိုးတွေကုို အရောက်သွားချင်ဖူးခဲ့တာ။ အရိပ်အဖြစ်၊ ပုံအဖြစ်၊ ရုပ်ရှင်အဖြစ်၊ မြင်ခဲ့ရ၊ တွေ့ခဲ့ရ၊ စိတ်ကူးယဉ်ခဲ့ရတဲ့ ဒီနေရာဟာ မရောက်ဖူးပေမယ့် စိမ်းမနေခဲ့ပါ။
ဒီနေရာကုို တကယ်ရောက်တော့ တချိန်က မဖြစ်နုိုင်တဲ့စိတ်ကူးအိပ်မက်ကုို မက်နေတာလုို့ ကုိုယ့်ကုိုယ်ကုို ထင်ခဲ့မိတာ မှားမှန်း ဝမ်းသာစွာ နားလည်နုိုင်ခဲ့တာ။
တွေ့မြင်ဖူးခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းများထဲမှာ ကျောက်နီသက်တန့်လုို ခုံးခုံးကွေးကွေး အရာတစ်ခုကတော့ စိတ်ထဲမှာ အစွဲထင်ဆုံးအရာတစ်ခုပါ။ Arches National Park ထဲက သဘာဝအလှတရား အမြောက်အများထဲက အထင်ကရ Delicate Arch ဖြစ်တယ်။ ဓာတ်ပုံတွေ၊ ဗီဒီယုိုနဲ့ ရုပ်ရှင် တွေထဲမှာ အများဆုံးတွေ့မြင်ခဲ့ရတာကလည်း ဒီ Delicate Arch ပဲဖြစ်တယ်။
DiscoveryMoab ဆုိုတဲ့ ဝက်ဆုိုက်တစ်ခုကုို ဝင်ရောက်ဖတ်ကြည့်တော့ Delicate Arch နဲ့ ပတ်သက်ပြီးခုလုိုရေးထားတာကုို တွေ့ရတယ်။
“ဒီနေရာကုိုလာကြတဲ့သူတွေဟာ အားလုံးဓာတ်ပုံရုိုက်ဖုို့သက်သက်ချည်းလာကြတဲ့ ဓာတ်ပုံ သမားတွေချည်းပဲ မဟုတ်ပါဘူး။ ကမ္ဘာကျော်သမုိုင်းဝင်နေရာတစ်နေရာဖြစ်တဲ့ ဒီအာ့ခ်ျနဲ့ ဒီပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့အလှတွေကုို ခံစားကြည့်ရှုဖုို့ ရောက်လာသူတွေလည်း ပါပါတယ်။ နောက်ပြီးသူတုို့ထဲမှာက ဒီကမ္ဘာကျော်အထိမ်းအမှတ် နေရာတစ်ခုဘေးမှာ ရောက်ခွင့်ရတယ် ဆုိုတာကုို ဂုဏ်ယူဝင့်ကြွားလုိုသူတွေ၊ ဒီအာ့ခ်ျကုိုဘေးမှာထားပြီး သူတုို့ဘဝရဲ့ အထင်ကရမှတ် တမ်းတစ်ခုကုို ကမ္မည်းထုိုးလုိုသူတွေလည်း ပါပါတယ်။
သူတုို့တတွေက သူတုို့ဘဝမှတ်တမ်းကုို သူတုို့မှာစိတ်ထဲမှာရှိတဲ့အတုိုင်း ပုံဖော်ကာသရုပ် ဆောင်ကြလိမ့်မယ်။ သူတုို့ဘေးမှာ သင်ရှိနေတယ်ဆုိုပြီး သူတုို့တွေက သင့်အတွက် အထူး တလည်နေရာပေးမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါကုိုတော့ သင်ကနားလည်ပေးဖုို့လုိုပါတယ်။ အကြံပြု ချင်တာကတော့ သင်လည်းပဲ သင့်စိတ်ထဲမှာ စိတ်ကူးရှိသမျှ သရုပ်တောင်ပြသပြီး မှတ်တမ်း ဓာတ်ပုံရုိုက်ယူနုိုင်ဖုို့ပါပဲ” တဲ့။
Delicate Arch အနီးကုိုရောက်သွားတော့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဓာတ်ပုံရုိုက်နေကြသူတွေကြည့်ပြီး အော်ပြီးပဲ မပြီးနုိုင်ကြပဲကုိုးလုို့ အတွေးဝင်ခဲ့တာကုို ပြန်သတိရမိတယ်။ တကယ်လုို့သာ Delicate Arch ကုိုမရောက်မီက ဒီစာလေးကုိုဖတ်မိရင် အဲဒီအတွေးမျိုး ဝင်ခဲ့မယ် မဟုတ်ပါ ဘူး။
တကယ်တော့ သူတုို့တွေကုိုသာ ကုိုယ်က ပြီးပဲ မပြီးနုိုင်ကြပဲကုိုးလုို့ တွေးထင်ခဲ့တာ။ ကုိုယ် ကုိုယ်တုိုင်လည်း သူတုို့တွေနဲ့ ထူးမခြားနားပါပဲ။ တကယ်လုို့သာ Delicate Arch ကုိုနောက် ခံထားပြီး မှတ်တမ်းဓာတ်ပုံရုိုက်ဖုို့နေရာ ကျဉ်းကျဉ်းလေးသာရှိမယ်ဆုိုရင်ဖြင့် ဓာတ်ပုံရုိုက်ဖုို့ တန်းစီစောင့်ရတဲ့လူတန်းက တုိုလှမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ မှတ်တမ်းတင်စရာနေရာက တော် တော်များလုို့သာ နေရာမစောင့်ခဲ့ရတာ။ ဒီအတွက်လည်း ကျေးဇူးပါ Delicate Arch ရာပေါ့။
အထက်ကစာကုို ရေးထားတဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကတော့ ခရီးသွားသူတွေနဲ့ အထာကုိုသိထား လုို့ ခုလုိုမှတ်တမ်းရေးထားတာပဲဖြစ်မယ်။ အော် တွေ့ကြုံရတာများတော့လည်း အတွေ့အကြုံ က စကားပြောတာဖြစ်ပေမပေါ့လေ။
ကုိုယ့်မျက်စိထဲမှာတော့ Delicate Arch က အနီရောင်သက်တန့်တစ်ခုလုို၊ ဒီဇုိုင်းလှလှ ဖန်တီး ထားတဲ့ တံခါးပေါက် ခုံးခုံးကြီး တစ်ခုလုိုသာ။ ဒါပေမယ့် ကောင်းဘွိုင်ဘောင်းဘီကုို မြင်နေကျ သူတွေမို့ ဒေသသားတွေကတော့ Delicate Arch ကုို ကောင်းဘွိုင်ဘောင်းဘီနဲ့ ခုိုင်းနှိုင်းကြ တယ်။
Delicate Arch က သဘာဝအတုိုင်း ဖြစ်တည်နေတဲ့ သမုိုင်းဝင်အလှတစ်ခုဖြစ်တယ်။ ဒါကြောင့် နှစ်ရှည်ကြာအောင် တည်တန့်ဖုို့ ဘယ်လုိုထိန်းသိမ်းကြမလဲလုို့ အကြိမ်ကြိမ်ဆွေးနွေး နည်းလမ်းရှာခဲ့ကြပေမယ့် ခုချိန်ထိတော့ တူညီတဲ့အဖြေကုို မရနုိုင်ခဲ့ကြသေးဘူး။
လက်ရှိအတုိုင်း မပျက်စီးပဲကြာရှည်ခံအောင် ပလပ်စတစ်ကုတ်တင်းလုပ်ဖုို့ ပညာရှင်တစ် ယောက်က အဆုိုပြုခဲ့တာကုို စဉ်းစားခဲ့ကြဖူးတယ်။ ဒါမေယ့် အဲဒီလိုလုပ်ရင် သဘာဝအလှ ဆုိုတဲ့ အဖုိုးတန်ရသ ပျက်စီးသွားမှာဆုိုပြီး ကန့်ကွက်ခဲ့ကြလုို့ အဲဒီအကြံလည်း မအောင်မြင်ခဲ့ ပါဘူး။ ကြာရှည်ခံတည်မှုနဲ့ သဘာဝကျကျလှပမှုကုို ထိန်းသိမ်းလုိုသူတွေအကြား ခုထိတော့ သဘာဝအလှထိန်းသိမ်းလုိုသူတွေက အသာစီးရနေဆဲပေါ့။ ချောက်ကမ္ဘားအစွန်ဖျားမှာ မုိုးဒဏ်လေဒဏ်နှင်းကြမ်းဒဏ်ကုို Delicate Arch က ဘယ်လောက်တောင်ခံနုိုင်မလဲဆုိုတာ ကတော့ ဘယ်သူမှ မသိနုိုင်တဲ့အရာပါပဲ။
ဒီကမ္ဘာမြေပေါ်မှာရှိနေတဲ့ သဘာဝတရားတွေရဲ့ လှပမှုတွေက အံ့သြဖွယ်ရာပါ။ လူတွေရဲ့စွမ်း ပကားကြောင့် သဘာဝတရားတွေကုို အတူပြုပြီး အတုလုပ်ကာ ဖန်တီးကြပေမယ့် သဘာဝ တရားတွေရဲ့ တကယ့်လှပမှုတွေကုို မှီနုိုင်ဖုို့ဆုိုတာကတော့ ဘယ်လုိုမှ မဖြစ်နုိုင်တဲ့အရာပါ။
ပုံထဲမှာ၊ ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာတွေ့ခဲ့ရစဉ်က Arches ဆုိုတာ ဒီမျှလောက်ကြီးမားခန့်ထည်တဲ့အရာ၊ အံ့သြဖွယ်အလှတရားတွေနဲ့ ပြည့်လျှမ်းနေတဲ့နေရာရယ်လုို့ ထင်မှတ်မထားခဲ့ပါဘူး။
တကယ်တော့ လူသားတွေရဲ့စွမ်းပကားဆုိုတာ တကယ့်သဘာဝအလှတရားတွေ အတုလုပ်ဖုို့ မပြောပါနဲ့ သဘာဝအတုိုင်းရှိနေတဲ့အရာများကုိုပင်လျင် အရှိအတုိုင်းမှတ်မျှတမ်းတင်နုိုင်ဖုို့ပင် လျင် မစွမ်းကြသေးဘူးဆုိုတာ Arches National Park ရဲ့ အလှတရားတွေကုို မျက်စိနဲ့ကုိုယ် တုိုင်မြင်တွေ့လုိုက်ရခြင်းက သက်သေပြလုိုက်သလုိုပါပဲ။
မြင့်မားပြီး ပါးလျတဲ့ ကျောက်နံရံကြီးတွေ လေမှာထောင်နေပုံက ကျွမ်းကျင်ပြီးအနုပညာ မြောက်တဲ့ ဒီဇုိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးက အနီရောင်စက္ကူချိုးပုံစံတွေကုို စားပွဲတစ်လုံးပေါ်မှာ စိတ် တုိုင်းကျ တင်ထောင်ထားသလုို။ ဒါပေမယ့် ဘယ်လောက်ကျွမ်းကျင်တဲ့ ဒီဇုိုင်းပညာရှင်တစ် ယောက်တလေမှ ခုလုိုကျောက်စုိုင်ကျောက်သားများရဲ့ ပကတိအလှနဲ့ အံ့မခန်းဖွယ်ဖြစ်တည် နေဟန်ကုို အတုပြုလုပ်နုိုင်လေမယ် မဟုတ်ပါဘူး။ လေထဲမှာ ထောင်နေလေတဲ့ ကျောက်တုံး ကျောင်စုိုင် ကျောက်ခုိုင်ကျောက်ချပ်များက လေထန်ထန်တစ်ချက် မွေ့လုိုက်ရင်ကုိုပဲ ကျောက် သားနံရံကြီးတွေက လေထဲပျံဝဲသွားတော့မည့်ဟန်။
မြင်ရဟန် ခန့်ထည်သလောက် တည်နေပုံက နွဲ့နွဲ့သွဲ့သွဲ့။ နောက်ပြီးဒီကျောက်နံရံကြီးတွေက အောက်ခြေကျောက်သားလွှာနဲ့က တဆက်တည်းမဟုတ်။ အထက်အောက်မဆက်ပဲ ပြတ် နေတဲ့အက်ကြောင်းကြီးများက ထင်ထင်ရှားရှား။
ဒါတင်လားဆုိုတော့ ဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလဲ။ ကျောက်နံရံကြီးတွေရဲ့ထိပ်ဖျားဆီမှာလည်း ကျောက်ပြားပေါ် ကျောက်သားတွေအဆင့်ဆင့်ထပ်လုို့။ အချို့အချို့ကျောက်တုံးများဆုိုရင် အောက်ခြေကျောက်သားနဲ့ ထိပ်ဖျားမှာတည်နေတဲ့ကျောက်က အရွယ်အစား မမျှမတ။ အောက်ခြေက သေးသေး။ ထိပ်ဖျားက ကြီးကြီး။ အချို့က ထီး၊ အချို့က ဦးချို၊ အချိုကြပြန် တော့ မှိုသဏ္ဍာန်။ တောင်ထိပ်မှာ လဲလျောင်းနေတဲ့ လူပုံနှယ်တစ်မျိုး။ ကမ်းခြေမှာ တန်းစီကာရပ်နေတဲ့ ပင်ဂွင်းငှက်တွေလုိုလုို၊ ကျောက်စုိုင်များကုိုလည်းတွေ့ရတယ်။
Arches National Park ထဲ ရောက်ရတဲ့ခံစားမှုက ခေတ်မီနည်းပညာများနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့ အံ့သြစရာအလွန်ကောင်းပြီး စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန် ခမ်းခမ်းနားနား ရုပ်ရှင်ကားကြီးထဲမှာ ကုိုယ်တုိုင်လုိုက်ပါစီးမျောနေသလုို ဖြစ်စေတယ်။
ကုိုယ်ရောက်သွားတဲ့နေ့က နေသာတဲ့နေ့။ နေရောင်ပြင်းပြင်းအောက်ဆုိုတော့ မြင်ရတဲ့မြင် ကွင်းကတော့ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း။ ဒါပေမယ့် ဒီနီညိုရင့်ကျောက်တောင်ကျောက်စွယ်တွေ၊ အံ့မခန်း အဆန်းတကြယ်ဖြစ်နေတဲ့ သဘာဝအလှတရားတွေကုို မှိုင်းပျပျ မုိုးကောင်းကင် အောက်မှာသာ တွေ့မြင်ရရင် တစ်မျိုးတဖုံ ခံစားရလိမ့်မယ်လုို့ တွေးခဲ့မိတယ်။
Arches National Park ရဲ့ ထူးခြားတဲ့အလှက ပြောလုို့ကုန်နုိုင်မယ် မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ် တော့ တောင်တန်းတွေဝန်းရံဝုိုင်းနေတဲ့ တောင်တံတုိုင်းတွေကြားမှာ ကြိုက်တဲ့ဖက်ဆီ မျက် နှာလှည့်လုိုက်ပါက တောင်တံတုိုင်းနောက်ခံနဲ့ အပြိုင်းအရုိုင်းလှချင်တုိုင်းလှနေတဲ့ ထူးဆန်း အံ့သြဖွယ် အလှသစ်တစ်ခုကုို တွေ့ရမှာပါ။ ဒါသည်ကပင် Arches ရဲ့ထူးခြားတဲ့သင်္ကေတ တစ်ခုသာပါ။
အကြောင်းသင့်လုို့ အချိန်ရမယ်ဆုိုရင်ဖြင့် မုိုးသားတိမ်လိပ်တွေအောက်မှာ ကြောက်မက်ဖွယ်၊ ထိတ်လန့်ဖွယ်၊ အံ့သြဖွယ်၊ လွမ်းမောဖွယ်၊ ရသပေါင်းစုံကုို တပြိုင်တည်းပေးစွမ်းနုိုင်မယ့် Arches National Park ဆီကုို နောက်တစ်ခေါက် အရောက်သွားချင်ပါသေးတယ်။
အံ့သြဖွယ် သဘာဝအလှတရားများရဲ့ ဖမ်းစားတဲ့ရသမျိုးစုံကုို တစ်နေရာတည်း၊ တစ်ပြိုင် တည်းမှာ ကုိုယ့်လုိုပဲ ခံစားလုိုတယ်ဆုိုရင်ဖြင့် အတူသွားဖုို့ စာရင်းပေးထားပေါ့။ ။
Posted by Nyan Oo Maung at 9:33 PM
Helmut Dempewolf April 25, 2018 at 6:57 AM
I've readafew excellent stuff here. Definitely value bookmarking for revisiting. I surprise how much effort you set to make this kind of great informative web site. yahoo sign in